Ogaden News Agency (ONA) – Turkiga oo Muqdisho ka Hirgaliyay Dugsi lagu barto Duulimaad yada.
Turkiga oo Muqdisho ka Hirgaliyay Dugsi lagu barto Duulimaad yada.
Dugsiga xariga laga jaray ayaa waxaa dhistay Hay’ada dowladda Turkiga u qaabilsan gargaarka iyo hormarinta ee Tika waxaana loo dhisay in lagu soo saaro Aqoonyahano Soomaaliyeed oo ka shaqeeya hay’ada Saadaasha iyo Duulista Hawada Soomaaliya.
Munaasabad kooban oo xariga looga jarayay Dugsiga ayaa waxaa goob joog ahaa Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada, Wasiiru Dowlaha Wasaaradaas, Safiirka dowladda Turkiga u qaabilsan Soomaaliya, Agaasimaha Hay’ada Socdaalka iyo Masuuliyiin kale.
Dhamaadka sanadkaan ayaa qorshuhu yahay in Soomaaliya ay dib ula soo wareegto maamulka Hawadeeda.